"तराजुमा प्रेम "का लेखक भन्छन् - 'श्रष्टालाई राज्यले प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कृत गर्नुपर्छ'
बैशाख ४, २०७६ मनु बिद्राेही
उपन्यासकार तथा गितकार पबिन दाहाल
उपन्यासकार तथा गितकार पबिन दाहाल एकदशक देखि साहित्यमा कलम चलाईरहनु भएको छ । रेडियो कान्तिपुरको साहित्यिक कार्यक्रम प्रस्तोता भुपेन्द्र खड्काको साथमा भाव संवेग बाट प्रभावित भएर गजल विधाबाट साहित्यमा प्रवेश गर्नु भएको हो ।
उहाँले गजल ,मुक्तक ,गित र उपन्यास लेख्नुहुन्छ।रेडियो कान्तिपुरबाट सम्मानित पनि हुनु भएको थियो ।संयुक्त गजल सङ्ग्रह "प्रवाशका अक्षर "(३०७०),संयुक्त गीति एल्बम "समर्पण"(२०७०) र "अनुपम"(२०७२) तथा उपन्यास "तराजुमा प्रेम"(२०७४)बजारमा आइसकेको छ। "तराजुमा प्रेम"का लेखकसंग सारङ्गीकर्मी मनु विद्राेहीले गरकाे कुराकानी :
_ खासै ब्यस्त त छैन यद्यपि धेरै समय उपन्यास कै सिलसिला मा बन्ने कार्यक्रम ,अन्तरबार्ता र आफ्नै ब्यक्तिगत काम मा ब्यस्त छु ।
_ साहित्य जीवन प्रकृति र समाजको कलात्मक ब्याख्या हो जस्तो लाग्छ l साहित्य सिर्जना आत्मा संतुष्टि का लागि र समाज लाई केही सकारात्मक शिक्षा मिलोस भन्नका लागि गर्छु ।
_ पहिले का साहित्यमा त्यही परिवेश त्यही युगका कुरा हुन्थे आजको युग धेरै विकसित भैसकेको छ आज समय अनुसारका गतिविधि छन साहित्य मा । यद्यपि पहिलेका साहित्य र लेखन शैली आजका भन्दा धेरै उत्कृष्ट छन जस्तो लाग्छ l
_ पहिले को तुलनामा अहिले धेरै महिला साहित्यकार बढेका छन यद्यपि महिला लाई पुरुषको तुलनामा समय कम मिल्छ । किनकी धेरै महिला छन जो बिबाह पस्चात पढाइ या आफ्ना हरेक अभिरुचि लाई चाहेर पनि अघि बढाउन सक्दैनन । मलाई मुख्य कारण यहि हो लाग्छ।
_ एकदम सहि हो । राम्रो लेखक पनि प्रचार गर्न नसक्दा अथवा मिडियाले स्थान नदिँदा ओझेलमा परेका छन । र यस्तै भेदभावका कारण केही गर्छु भन्ने जोस र क्षमता भएका लेखक को मनोबल गिर्ने गरेको छ ।
-समाज ले केही यस्ता लेख पढ्न पाउनु पर्छ जसमा नैतिकता मानबता र स्वच्छ आचरणका पाठ सिकाइएको होस।
_राम्रो श्रष्टालाई पहिचान गरि राज्यले प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कृत गर्नु पर्छ । अहिले सोर्स र फोर्सले गर्दा राम्रो लेखकले ठाउँ पाएको छैन भन्ने पनि सुन्नमा आएका छन । यस्ता राजनीति बन्द हुनु पर्छ ।
-नेपाली साहित्यमा पहिला देखिनै केही न केही आगन्तुक शब्द आएका छन । तैपनी बिशुद्ध भाषा हुनुर्पछ।
उपन्यास लेख्दा विशेष केके कुरामा ध्यान दिनुपर्छ?कथावस्तु र शिर्षकको तालमेल कसरी मिलाउनुपर्छ ?
- विशेषत उपन्यासको रुप रेखा पुर्ण रुपमा तय भैसक्नु पर्छ अनि मात्र कथा लेख्न सजिलो हुन्छ। समय स्थान र प्रसंगलाई मज्जाले व्याख्या गर्न सक्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ।
उपन्यास "तराजुमा प्रेम "भित्र केके भेटिन्छ? केका लागि पाठकहरुले पढ्नु पर्छ?
- तराजुमा प्रेम भित्र समाज का धेरै पक्ष भेटिन्छन । युबा पुस्तामा आउने बिकृती अनि त्यस्ले निम्त्याएको परिणाम भेटिन्छन । त्यस्को अलवा प्रेम रोमान्स दु:ख,पिडा, गरिबी दुर्घटना, विवशता जस्ता धेरै कुरा छन । यिनै कुरा थाहा पाउन पढ्नै पर्छ भन्छु।
साहित्य सिर्जना र सर्जक सबैको उचित सम्मान हुनु पर्छ । समाज का सबै पक्ष बाट अथवा राज्यको तर्फ बाट किनकी कलमले देश बदल्न सक्छ ।
बुधवार, बैशाख ४, २०७६, ११:०४:००